Mabadi’da - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF waa hay’ad caafimaad oo aan faa’iido-doon ahayn oo la aasaasey sanadkii 1971. Maanta MSF waa dhaqdhaqaaqa caalami ah, oo leh 19 xafiisyo daleed iyo xafiis caalami isugu jira. Badi shaqaalaheenna dadaalka badan waxa ay ka yimaadeen dalalka aan mashaariicda ka wadno, kuwaas oo ay taageerayaan tiro yar oo shaqaale caalami ah oo iyagana muhiimad kuwaas hore la mid ah leh. Sanadkii 2008dii, 23,944 shaqaalaha gudaha ah ayaa la shaqeynayey 2,029 shaqaale caalami ah si ay daryeel caafimaad ugu bixiyaan in ka badan 65 dal oo dunida ku baahsan.
MSF waa urur madax bannaan. Tani waxa uu micnaheedu yahay in ururka MSF aanu ahayn mid siyaasadeed oo uusan u janjeerin kooxo dowladeed, siyaasadeed, diimeed, qabiil ama dhaqaale. Go’aamada la xiriira halka aanu ka hawlgaleyno iyo nooca daryeelka caafimaad ee aannu bixineyno waxa aan u gaarnaa si ku fadhida daraasaddeenna khibradda ku dhisan ee aan ku sameyno baahiyaha, iyo sidoo kale tixgelin aannu siinno halista ay leedahay xaaladdda markaa jirta.
Madax bannaani maaliyadeed
MSF waxaa ay sidoo kale leedahay madax bannaani maaliyadeed. Ilaa markii la aasaasey ururka sanadkii 1971, MSF waxa ay ka shaqeysey in ay hubiso in badi maaliyaddeedu ay ka timaaddo deeqo sadaqo ah oo ay bixiyaan dadweynaha ku dhaqan dunida oo dhan. Dalka Soomaaliya, ayaa MSF waxa ay diiddeysaa in ay wax lacag ah ka qaadato dowlado ama hay’ado dowladeed si aannu u sii haysanno madax-bannaani buuxda.
Guji halkaan oo eeg Warbixin-maaliyadeedda Caalamiga ah ee MSF ee sanadkii 2009da
Ka urur caafimaad ahaan
MSF waa urur caafimaad, sidaa daraaddeedna, hawlaheenna waxaa haga anshaxa caafimaadka. Tani waxa uu micnaheedu yahay in aanan dhinacna la jirin iyo in aanan farogelin arrimaha degaan u gaar ah, haddii ay yihiin kuwo bulsho, siyaasadeed, diimeed ama qabiil. Waxa aan bukaannada u daaweynaa si ku saleysan baahida caafimaad oo keliya, halka ay doonaan ha ka yimaadeen ama cidda ay doonaan ha ahaadaane. Isla waqtigaas, waxa aan mar kasta ixtiraamnaa dhaqanka iyo diinta ay dadku aaminsan yihiin.